Christ of the Ozarks - WRSP
Caitlin St Clair David G. Bromley
KRISTI EGO OZARKS
1898 (February 7): Gerald Lyman Kenneth Smith mụrụ na Pardeeville, Wisconsin, nke Lyman Z. Smith na Sarah Smith.
1918: Gerald Smith nwetara akara mmụta na Akwụkwọ Nsọ na Mahadum Valparaiso dị na Indiana, wee bụrụ onye ozi na Wisconsin, Illinois na Indiana.
1922: Gerald Smith lụrụ Elna Sorenson.
1929: Smith ghọrọ onye ụkọchukwu na Kings Highway Disciples of Christ Church na Shreveport, Louisiana.
1929: Ọnwa asaa ka ọ bịarutere Shreveport, Smith gbara arụkwaghịm na chọọchị ahụ tupu ha ewepụ ya maka mkpakọrịta ya na onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị Huey Long na-aga n'ihu.
1935 (Septemba): Mgbe e gbusịrị Huey Long, Smith malitere njikọta na Francis E. Townsend.
1936: Smith na Townsend sonyeere Fada Charles E. Coughlin imepụta Union Party, nke dara n'oge na-adịghị anya n'ihi esemokwu onwe onye.
Mbubreyo 1930s – 1940s: Smith haziri ọtụtụ otu iji lụso komunizim, liberalism, ọrụ na ndị Juu ahaziri.
1956: Smith nyere ikike ikpeazụ maka White House dị ka onye ndoro-ndoro nke Christian Nationalist Party.
1964: Gerald Smith na nwunye ya Elna M. Smith zụtara ụlọ na Eureka Springs ma mee ya ụlọ ezumike nká ha.
1966 (June 25): Elna M. Smith Foundation rụchara ma rara Christ nke Ozarks akpụrụ akpụ, nke mbụ n'ime ise dị nsọ nke Smith, ya na Emmet Sullivan dị ka onye na-ese ihe.
1966–1975: Christ Only Art Gallery, Bible Museum na ebe amphitheater dị n’èzí (ụlọ Passion Play) ka ewuchara.
1976 (Eprel 15): Gerald Smith nwụrụ site na oyi baa na California.
2012 (Disemba): Cornerstone Bank bidoro "ịkatọ mmadụ" nke ala na Eureka Springs, gụnyere akpụrụ akpụ.
2013: Ogige isiokwu na ala niile (gụnyere ihe akpụrụ akpụ) zụrụ site na South Central Oklahoma Christian Broadcasting na-ahụ maka redio redio.
Gerald LK Smith mụrụ Lyman Z. Smith na Sarah Smith na February 7, 1898, na Pardeeville, Wisconsin. Ọ bụ rịdata site n'ọgbọ atọ nke ndị na-eso ụzọ Kraịst nke ndị ozi Kraịst, na mgbe ha nwetachara akara na Mmụta Akwụkwọ Nsọ na Mahadum Valparaiso na Indiana na 1918, ghọrọ onye ozi n'onwe ya na Wisconsin, Illinois na Indiana. Afọ anọ ka nke ahụ gasịrị, na 1922, Smith lụrụ Elna Sorenson, ha wee kuchiri otu nwa ha, Gerald LK Smith Jr. na 1929, mgbe Smith kwagara Shreveport, Louisiana ka ọ rụọ ọrụ dị ka ụkọchukwu na Kings Highway Disciples of Christ Church, zutere Huey Ogologo oge, onye ọka iwu na onye nnọchi anya US n'ọdịnihu. N'ihi mkpakọrịta nke Smith na Long, onye ndị populist na-agbagha esemokwu, a manyere Smith ịhapụ ọrụ ya dị ka pastọ iji zere ịbụ onye ndị isi ụka na-ewe iwe na ndị na-achọghị mgbanwe chụrụ ya.
Mmekọrịta chiri anya Smith na Long nwetara ya n'ọkwá dị ka ọkà okwu ihu ọha maka mkpọsa Long, ma nye ya ohere ikpo okwu nke iji kwalite echiche ya na-emegide ndị Juu na onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Long nọ na-eme atụmatụ ịbụ onye ndoro-ndoro na ntuli aka onye isi ala na 1936 mana e gburu ya na Septemba, 1935. Mgbe Long nwụsịrị, Smith sonyeere dibịa lara ezumike nká bụ Francis E. Townsend na ụkọchukwu Roman Katọlik bụ Fada Charles E. Coughlin guzobe Union Party. Ndị otu a ahọrọ ịkwado onye nnọchi anya North Dakota William Lemke megide Onye isi ala Franklin D. Roosevelt. Otú ọ dị, ndị otu ahụ nwere esemokwu nkewa nke onwe, na ịhọpụta Lemke.
N'ime afọ ndị sochirinụ, Smith chọtara ụzọ ndị ọzọ iji kwalite echiche ya ndị na-ese okwu. Ọ hibere Kọmitii nke Otu Nde, Christian Nationalist Crusade, akwụkwọ a na-akpọ kwa ọnwa Obe na Ọkọlọtọ , America First Party na Christian Nationalist otu. Ebumnuche ndị a gbadoro anya na mmegide nke ọchịchị Kọmunist, nnwere onwe, ọrụ a haziri ahazi, ma ọ bụ ndị Juu. Ndị otu a bụ ntọala maka ọtụtụ mkpọsa na-emeghị nke ọma maka ndị omebe iwu US na ndị isi. N’ọsọ ikpeazụ ọ gbara maka ịbụ onye isi ala n’okpuru ọkọlọtọ nke Christian Nationalist Party na 1956, Smith nwetara naanị nkwado n’aka nri aka nri, n’agbanyeghi na o nwere ndị na-akwado ya zuru oke iji kwụọ ụgwọ mkpọsa ya.
Na 1964, Gerald Smith na nwunye ya zụtara Penn Castle na Eureka Spring, Arkansas. Obodo Ozark Mountain a ga-abụ nke ha ezumike nká. Afọ abụọ ka ha rutere, Smith bidoro ebumnuche ya ogologo oge nke ịmepụta Ihe Odide Ya dị nsọ na ogige ntụrụndụ okpukpe Passion. Nke mbu n’ime oru ndi a bu Christ of the Ozarks Statue, akuko nke asaa nke Jisos. Onye kere ihe bu Emmet Sullivan kere ihe a n'onwe ya, site na enyemaka nke Elna Smith Foundation, e wuchara ma rara ya na 1966. Ejiri ihe karịrị nde pound abụọ nke ụlọ na ihe eji wuo ihe akpụrụ akpụ ahụ.
N'afọ ndị sochirinụ, Smith ga-agbakwunye Christ Only Art Gallery, Ebe Ngosi Ihe Mgbe Ochie nke Bible na Egwuregwu Passion na nnukwu ogige isiokwu Ndị Kraịst ya. Ọrụ ndị a dị nsọ bụ uru akụ na ụba dị ukwuu nye Eureka Springs na yabụ, n'agbanyeghị nkatọ ụfọdụ nke obodo, Smith haziri ọrụ ọzọ, nke ka ibu: “$ 100 nde, dị ka Disney nke Ala Nsọ, gụnyere Nnukwu mgbidi Jerusalem, Oké Osimiri Galili, na Osimiri Jọdan ”(Jeansonne 2009). Agbanyeghị, ọ bụ naanị mgbidi ka emechara tupu ọnwụ Smith. GeraldSmith nwụrụ na oyi baa na Eprel 15, 1976 na ụlọ oyi ya na California. Ya na nwunye ya liri ozu n’ala ụkwụ nke Christ of the Ozarks Statue.
Ihe akpụrụ akpụ ahụ guzo n’elu Magnetic Mountain wee chee ihu n’ọdịda anyanwụ, na-akọ ka o kelee Eureka Springs maka ikwe ka Smith mepụta nke ya ndụ ogologo oge ("Christ of the Ozarks" nd). Na-agụta ugwu dị ogologo ụkwụ 1,500 nke ihe akpụrụ akpụ n’elu ya, Christ of the Ozarks (nke n’onwe ya dị iri isii na asaa n’ogologo) bụ onye nke atọ toro ogologo n ’ụwa. Site na ụfọdụ akụkọ, ihe akpụrụ akpụ a nwere ụkwụ n'okpuru uwe ya, mana ewepụrụ ha iji kwado ụkpụrụ dị elu ka a ghara itinye ihe mgbaàmà ịdọ aka na ntị n'isi.
Ruo 2013, Christ nke Ozarks, na acres 167 nke gbara ya gburugburu, bụ ndị Elna Smith Foundation na-enweghị uru, aha ya maka nwunye Gerald Smith nwụrụ. Keith Butler rụrụ ọrụ dị ka onye isi oche nke Elna Smith Foundation. Sam Ray bụ onye isi oche nke Great Passion Play ruo 2013 ma rụọ ọrụ dị mkpa na njikwa ụbọchị kwa ụbọchị nke ihe oyiyi ahụ. Otú ọ dị, nzukọ ahụ enweghị ike izute nnyefe ego na ụtụ isi, nke mere ka ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ịnweta site na Cornerstone Bank na ịchọ ego site na ntọala (Brantley 2012; Millar 2012). Na mmechi, ndi South Central Oklahoma Christian Broadcasting radio ministry na 2013 zutara ogige ahu na 2013 (“Azoputara” XNUMX).
Ihe oyiyi a echewo ọtụtụ ihe mgbochi ihu, ma tupu ya ma mgbe ọ na-ewu ya. Nsogbu ego nke ihe oyiyi ahụ malitere n'oge. Smith malitere oru ngo na naanị $ 5,000 na ego. Otú ọ dị, Smith jisiri ike nweta $ 1,000,000 na onyinye maka ọrụ ahụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ozugbo (Schick 2013). Ihe oru ngo a bu ihe mgbaze rue etiti 2000s mgbe ndi mmadu na-abanye na Great Passion Play na onodu aku na uba na-acho ime ka nsogbu ego. Ogologo oge iji nweta ego ugbu a dabere na nkwado sitere na Network Station Network.
Ihe oyiyi ahụ abụwokwa ihe ọchị ụfọdụ na-atọ ọchị. Smith họọrọ onye na-ese ihe maka ọrụ ahụ na-arụtụbeghị ọrụ na a mmadụ ọgụgụ. Nke a emeela ka nkatọ na-aga n'ihu banyere ọdịdị na atụmatụ nke ihe akpụrụ akpụ. Ihe na-adịghị mma banyere ihe akpụrụ akpụ ahụ gụnyere ya na-enweghị agụụ n’azụ anya ya, dịka Willie Nelson na uwe, ma na-ele ka katọn mmiri ara ehi nwere bọọlụ tenis n’elu. Ndị bi obodo na-ezo aka mgbe ụfọdụ na ihe oyiyi ahụ dị ka katọn mmiri ara ehi na ogwe aka. Ka o sina dị, dị ka otu onye na-eduzi ihe oyiyi ahụ kwuru, “Enweghị m mmasị na akpụrụ akpụ ahụ. Njirimara ndị ahụ siri ike ma sie ike. Mana ọ bụ ihe ncheta nye Onye Nzọpụta anyị, na maka nke ahụ ọ dị mma "(" Christ of the Ozarks nd)
Ihe ịma aka ikpeazụ nke yiri ka edozila bụ mgbochi Semitism metụtara ọrụ ahụ niile na akụkọ ihe mere eme. Dịka ọmụmaatụ, Smith kwuru otu oge na ogige isiokwu ahụ bụ "naanị ngosipụta nke ụdị ya n'ụwa nke na-agbanyeghị ọdịnaya ya iji mee ka ndị Juu kpọrọ asị" (Jeansonne 2009). Ma, ọnwụ Smith na nhọpụta nke njikwa ọhụrụ arụpụtala ọtụtụ oghere na anabata nke ọma. Mgbe nke ahụ gasịrị, Nnukwu Egwuregwu Ukwu ahụ gọnarịrịrị echiche Smith, mepee mmemme ya na nkwupụta ahụ, “Anyị nọ ebe a na Akwa Playing kwenyere na anyị niile ga-ata ụta maka ọnwụ Jizọs. O nweghi otu ndị nwere ma ọ bụ naanị kpatara ya. Mba, ọ bụ mmehie nke ụwa mere ka ọ nọkwasị n’obe ”(Brantley 2012). N'ihe banyere 2012, e nwere ihe karịrị ndị ọbịa 7,500,000 na-eleta Christ nke Ozarks akpụrụ akpụ, yana nkwado ego ọhụrụ gosipụtara na ọ kwadoro na ọ gara n'ihu ọha.
Brantley, Max. 2012. "Na Attga Down, 'Great Passion Play' Ihu Mmechi." Arkansas Times, September 25. Nweta site na http://www.arktimes.com/ArkansasBlog/archives/2012/09/25/with-attendance-down-great-passion-play-facing-closure na 1 May 2014.
“Christ of the Ozarks. nd ” Okporo ụzọ America. Nweta site na http://www.roadsideamerica.com/story/17113 na 1 May 2014.
“Jizọs nke Eureka n’elu ugwu.” Nyochaa akụkọ ihe mere eme nke ndịda, 2011. Nweta site na http://www.exploresouthernhistory.com/eureka6.html na 1 May 2014.
Jeansonne, Glen na Michael Gauger. 2009. "Gerald Lyman Kenneth Smith." The Encyclopedia of Arkansas History and Culture . Nweta site na http://www.encyclopediaofarkansas.net/encyclopedia/entry-detail.aspx?entryID=1767 na 1 May 2014.
Millar, Lindsey. 2012. "Great Rihanna Play 'na-emechi, nnapụ n'ike." Oge Arkansas , December 4. Nweta site na http://www.arktimes.com/ArkansasBlog/archives/2012/12/04/great-passion-play-closes-foreclosure-underway on 7 May 2014 .
"Zọpụtara: Nnukwu Mmasị Egwuregwu Iji Maliteghachi Ihe Ngosi na May." 2013. Ozarks Akpa , March 1. Nweta site na http://www.ozarksfirst.com/story/saved-great-passion-play-to-resume-shows-in-may/d/story/0Ccfn3SBBkWmGAm81564cg
Schick, Dennis. 2013. "Akwa Rihanna Play." Encyclopedia nke Arkansas History and Culture. December 2. Nweta site na http://www.encyclopediaofarkansas.net/encyclopedia/entry-detail.aspx?entryID=5651 na 1 May 2014.
KRISTI OZARKS Njikọ vidiyo